We are Sherpa, Learn Sherpa,about sherpa community, sherpa langague, sherpa culture, sherpa disctonary, sherpa literature.....
शेर्पा र बुद्धधर्म
शेर्पाहरुको मुख्य चाडपर्व
शेर्पा भन्ने नामकरण कसरी भयो
शेर्पा भाषा किन सिक्ने ?
मातृभाषा खर्चेर नै सिक्नु पर्छ ?
शेर्पाहरुको बास स्थानान्तर
शेर्पाहरुको दैनिक जिवन
शेर्पाहरुको वर्तमान काल
Buddhism & Beliefs
The Twelve Deeds of Buddha
History of The Nyingma Doctrine
Langague & Alphabet
विश्वका भाषा र लिपिहरुको छोटो इतिहास
भारतमा लिपिको सुरुवात
तिब्बतमा लिपिको सुरुवात
भाषा र लिपिको स्थानान्तर इतिहास
भाषा र लिपि लोप हुने कारण
भाषा र संस्कृतिहरू नष्ट हुने कारणहरु
भाषा र लिपि नष्ट भएको अन्तिम परिणाम
भाषा नष्ट हुनबाट कसरी रक्षा गर्नै
Grettings and Farewells
Common Words or Expressions
Studying Sherpa Language
Pronoun and Adverbs
HiringaTaxi
Solu Khumbu Four Seasons
Asking About Time and Date
Traveling by bus/ Micro
Musical Instruments & Terms
InaMonastery
Sherpa New Year
शोर्पा भाषाको वर्णमाला
कसरी बन्यो त्रिपिटक ?
बुद्ध वचनको संग्रहका रूपमा हामीसँग बृहत् त्रिपिटक छ । मौखिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि प्रवाहित बौद्ध वचन त्रिपिटकमा प्रमाणित रूपमा संग्रह गरिएका छन् । यही त्रिपिटकले अहिलेको लिखित स्वरूप कसरी लियो ?
- हिमेशरत्न वज्राचार्य
जेष्ठ ८, २०७३- उ‘जे भयो, राम्रै भयो । गुरु भएनन् भने विद्यार्थीलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्ने छुट मिल्छ । अहिले यस्तै भएको छ ।’बौद्ध धर्मको इतिहासको यो चर्चित भनाइ हो । भलै यो दुर्वचन हो । आज २५६० औं बुद्ध जयन्ती । बुद्ध महापरिनिर्वाणको दिन पनि । त्यसको एक साता नबित्दै बुद्धले निर्वाण प्राप्त गरेको सुनेर सुभद्र नामका भिक्षुले बोलेको वचन हो, यो । बुद्धको निधनमा खुसी व्यक्त गर्ने अरू कोही थिएनन्, बुद्धले निर्माण गरेको संघभित्रबाट यो विचार थियो । बुद्धले यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नू भनेर मात्र उपदेश दिएकोमा सुभद्र दिक्क थिए । उनी बुढेसकालमा भिक्षु बनेका थिए ।
बुद्धको जीवनकालमै उनको निर्वाणपछि धर्म लोप हुनेछ भन्ने एकखाले आशंका थियो । यस्तोमा सुभद्रको यो विचार । बुद्धका खास शिष्यमा पर्छन्, महाकाश्यप । सुभद्रको भनाइबाट उनलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक थियो । उनीजस्तै अरू अनुयायीलाई लागेको थियो, अब बुद्ध वचनलाई कसले सम्हाल्ने हो त ? एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता बुद्ध वचनलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने त ? उनीहरूको यो चिन्ता भावनात्मक मात्र थिएन । यस्तोमा महाकाश्यपसँगै सबै प्रमुख भिक्षुहरूले निर्णय गरे, संघको भेला बोलाउने । बौद्ध धर्मको इतिहासमा यस्ता केही खास खास भेला बोलाइएको छ र यसैले बौद्ध धर्मको इतिहास तयार पार्न मद्दत गरेको छ । यी भेला बौद्ध साहित्यमा संगायना नामले चर्चित छन् । बुद्धले बुद्धत्व प्राप्तिदेखि निर्वाणसम्म उपदेश थिए । उनले ती उपदेश शिष्यलाई मात्र दिएका थिएनन् । सर्वसाधारणका लागि पनि थिए ती ।
उनले आफूले स्थापना गरेको संघ सञ्चालनका लागि नियम पनि बनाए । बुद्धको जीवनकालमा उनका उपदेश मौखिक थिए । त्यसलाई लिखित राख्ने चलन थिएन । उनले ती सबै उपदेश एकै स्थानमा पनि दिएका थिएनन् । बुद्धका वचनमा दुविधा हुँदा उनी आपैंmले समाधान पनि गर्थे । बुद्धले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर निर्वाणपछि धर्म र विनय नै प्रमुख हुने बताएका थिए । निर्वाणको यति धेरै वर्षपछि ती उपदेश जीवन्त रहनु इतिहासको दृष्टिकोणमा अद्वितीय छ । बुद्ध वचनको संग्रहका रूपमा हामीसँग बृहत् त्रिपिटक छ । मौखिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि प्रवाहित बौद्ध वचन त्रिपिटकमा प्रमाणित रूपमा संग्रहित छन् । यही त्रिपिटकले अहिलेको लिखित स्वरूप कसरी लियो र अहिलेसम्म आइपुग्न के कस्तो यात्रा तय भएको थियो त ? यी प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । इतिहास यहींनिर रोमाञ्चक हुन्छ ।
केही बौद्ध भेला अहिले मात्र होइन, जहिले पनि सम्झनलायक यसैको सेरोफेरोमा हुने गर्छ । ती बौद्ध भेला बौद्ध धर्मको इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छन् । स्वाभाविक रूपमा ती भेला नबसेको भए, बौद्ध धर्मको स्वरूप अहिलको जस्तो हुने थिएन । बौद्ध धर्मको इतिहास अध्ययन सुरु भएको पनि धेरै भएको छैन, सन् १८०० यता मात्र हो । इतिहास अध्ययनमा धार्मिक इतिहासलाई पनि प्रमुख विधा मानिन्छ । इतिहासको यो विधामा धेरैको रुचि पाइन्छ । बौद्ध धर्मको इतिहासको प्रमुख स्रोत त्रिपिटक नै हो । पाली भाषाको त्रिपिटक सबैभन्दा प्रमाणित मानिन्छ । त्रिपिटकमा सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक छन् । यसको अध्ययनबाट तत्कालीन समय परिस्थितिबारे पर्याप्त जानकारी लिन सकिन्छ । बुद्ध परम्पराअनुसार बुद्धको निर्वाणपछि प्रथम संगायनाको आयोजना भएको थियो । माथि उल्लेख भएका तिनै सुभद्रको अमांगलिक घोषणा नै पहिलो त्यस भेलाको तत्कालीन कारण बनेको थियो । बुद्ध निर्वाणका बेला महाकाश्यप कुशीनगरमा थिएनन् । उनी पावाबाट त्यसतर्फ आइरहेका थिए ।
एक नग्न साधुले बुद्ध निर्वाणको खबर सुनाए । त्यो सुनेर खुसी हुँदै सुभद्रले अब सबैलाई आराम हुने, कोही पनि कचकच गरिरहने व्यक्ति नहुने दुर्वचन बोलेका थिए । खासमा बुद्धले आफ्नो जीवनकालमै धर्मलाई शुद्ध रूपमा चिरस्थायी राख्न संगायनाको आदेश दिएका थिए । यस्तो भेला त्यो समयको माग पनि थियो । कारण धेरै छन् । जस्तो, बुद्ध जीवनकालमै त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले बुद्धलाई मान्दैनथे । जस्तो देवदत्त । उनी त्यस्तो पहिलो व्यक्ति हुन्, जसले बौद्ध संघमा पहिलोपल्ट फुट ल्याए । संघभित्र पनि अनेक प्रकारका भिक्षु थिए । उनीहरूको सोच पनि फरक–फरक थियो । यस्ता केही भिक्षु पनि थिए, जो बुद्धले बनाएका नियम तोड्न खुसी हुन्थे । एकपल्ट संघमा कति धेरै विवाद भयो भने बुद्ध आपैंmले त्यसको समाधान गर्न सकेका थिएनन् । यस्तै बुद्धले आफ्नो निर्वाणपछि कसैलाई उत्तराधिकारी तोकेका थिएनन् । बुद्ध धर्म नै प्रमुख हुने जिकिर गर्थे । अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य त्यति बेलासम्म बुद्धका उपदेश उनका शिष्य र अनुयायीमाझ ताजै थियो ।
प्रथम संगायनाको वातावरण तय भयो । त्यस भेलाका सभापति महाकाश्यप आपैंm बने । स्थान भने राजगृह थियो । त्यहाँ सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । आनन्दसँगै भेलामा पाँच सय भिक्षु सहभागी थिए । त्यही भेलामा धर्म र विनय निश्चित भएको थियो । मौखिक परम्परामा रहेका बुद्ध वचनलाई सुरक्षित र चिरस्थायी राख्न पर्याप्त सतर्कता अपनाइएको थियो । पहिलो संगायनाबाट संकलित बुद्ध वचनलाई सानो सानो भागमा विभाजन गरिएको थियो र त्यसलाई मौखिक रूपमा सुरक्षित राख्ने काम फरक फरक समूहलाई दिइएको थियो । भिक्षुहरूले आफ्नो भागमा आएका धर्म र विनयका अंशलाई पाठ गर्न सुरु गरे र भाणक परम्परा सुरु भयो । यसरी बुद्ध वचन सुरक्षित रहन थाल्यो । तर बुद्धको निर्वाणको ठीक सय वर्षपछि फेरि विवाद उठ्यो– बुद्धले खासमा भनेका के थिए ? यस्तै अन्योलबीच वैशालीमा दोस्रो संगायना भयो । तेस्रो संगायना राजा अशोकको पालामा भएको थियो ।
अशोकको समयसम्ममा बौद्ध धर्ममा यति धेरै फरक सम्प्रदाय अस्तित्वमा आइसकेका थिए कि बुद्ध वचनलाई फरक समूहले फरक व्याख्या गर्न थालेका थिए । यस्तोमा बुद्ध वचनमा एकरूपता आवश्यक थियो । यो भेला नौ महिनासम्म चलेको थियो र यससँगै त्रिपिटकको संकलन काम पूरा भयो । तेस्रो संगायनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने यसको समाप्तिमा अशोकले बौद्ध धर्मको प्रचारका लागि आफ्नो दूतहरू विभिन्न देशमा पठाए । अशोकका छोरा महेन्द्र आपैंm श्रीलंका पुगे । त्यही श्रीलंकामा त्रिपिटकलाई लिखित रूप दिइयो, जुन अहिलेसम्म हामीसँग सुरक्षित छ ।
प्रकाशित: जेष्ठ ८, २०७३
चेपाङ भाषा संरक्षण
बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी वन
बुद्ध शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण
बुद्धको हाल !
The Sherpas - The Himalaya's Natives
प्रस्तुत We Are Sherpa Website पिके हिल सोसीयल ओर्गनाइजेसन (Peeky Hill Social Organization) को अध्यक्ष आदरणीय श्री ङिमा देण्डी ज्यूको विचारमा आधरित भएर तयार पारिएकोहो ।
About Sherpa Community
Happy Feet Travel
Peekye Hill Social Org.
Glorious Tea & Herbal
Copyright © 2016.We are Sherpa. All Rights Reserved.